Isbeddelka Sacuudiga-Faallo | Doodwadaag waa Danwadaag.
Boqorka Sacuudiga, Salmaan Bin Cabdulcasiis, waa nin da’a ah, waxaana la sheegayaa in uu hayo xanuunka “dementia” oo xusuusta ka saameeyay.
Laba sano ka hor, wiilkiisa Maxammed Bin Salman oo markaa 29 jir ahaa ayuu Wasiirka Gaashaandhigga u magacaabay. Illaa haddana waxaa lagu xusuustaa mashaqada iyo hoogga Yemen ka alloosan, oo dhanka kale ah dagaal dalka Sucuudigu si aad ah ugu faqriyay. Bishii April ee sannadkan waxa uu u magacaabay wiilkiisa Khalid Bin Salman, oo ah dhowr iyo labaatan jir, xirfadiisuna duuliye tahay, inuu noqdo Safiirka Sucuudiga u fadhiya Mareykanka. Wasiirka Arrimaha gudaha waxaa uu u magacaabay will 32 jir ah, Cabdulcasiis Bin Sucuud Bin Naif. Haddana wiilkiisii Maxammed Bin Salman ayuu ka dhigay ninka koowaad ee dhaxalka boqortooyada leh, goor aanan fogeeyna xilka la wareegi doono.
Golaha Hay’atal Baycah ee ka arrimiya aayaha (masiirka) Boqortooyada si aqlabiyad ah ayuu ku ogolaaday isbadalkan ayaa la leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka, Abu Ivanka, waa barakeeyay sida wax u socdaan, fool-baxsigiisana waa uu ka qaatay.
Gobolka Bariga Dhexe oo in ku filan oo dhibaato ah la il-darnaa, ayaa haddana waxaa muuqata in dagaal hor leh loo bis bisoonayo oo markaan ay hor kacayaan dhalinyaro aanan waayo-arragnimo iyo biseyl hogaamin siyaasadeed toona laheyn. Go’doominta Qatar waa mashruucooda koowaad, waana arrin halisteeda leh.
Dowladaha Khaliijka iyo guud ahaan Gobolka Bariga Dhexeba waxaa in badan lagu soo caano maalay awoodda Mareykanka oo kala hor joogtay. Sidii uu hogaanka Mareykanka u qabtay Abu Ivanka (Trump), waxaa abuurmay “global leadership vacuum”, firaaq iyo maqnaansho hogaankii dunida, waxa ay taa la ekeydba. Haddii kol horrana caqli iyo xilkasnimo aanan lagu kala joogin, haddana ciddii ku kala dhex jirtay ay daraf la safatay, ifafaalaha soo muuqda ma qurxana. Waxaan ka baqayaa in dariiqii Suuriya, Liibiya iyo Yemen cagta la saaro.
Ku dhowaad konton sanno oo barwaaqo iyo hodonnimo aheyd oo ay wadamada Khaliijka ah ku noolaayeen, waxaanan daaro waaweyn ka aheyn lagama faa’iidin. Heerka garashada dadnimo iyo ummadnimo ee arligaa ka jirta waa qosol ku jab.
Iran, Turkiga iyo Isra’iil waa heegan; haddii aanan cid ku baxda la helin, cawaaqib aanan la mahadinin ayaa soo socota.
Allaha umuuraha ha sahlo.
Ustaad Ibraahim Axmed Cisaam